यी हुन् 'सेक्स पावर' बढाउने चमत्कारिक घरेलु औषधी - Gokarna News
सोमबार, चैत ११, २०७५
यी हुन् ‘सेक्स पावर’ बढाउने चमत्कारिक घरेलु औषधी
सोमबार, असोज २९, २०७५ by Gokarna News
एजेन्सी– यौन प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । यसको चाहना सबैलाई हुन्छ । तर चाहना हुँदाहुँदै कतिपय पुरुषहरूमा यौन क्षमतामा कमी हुन्छ । जसको कारणले भियाग्रा जस्ता औषधीको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ । तर त्यसले पछि गएर नकारात्मक असर पार्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । यौन दुर्बलता भएकाहरुले भियाग्रा खाइरहनु पर्दैन । यौन क्षमता बढाउने घरेलु औषधीहरु प्रसस्तै रहेका छन ।
प्राय सम्पूर्ण मानिसहरूले गाजरको प्रयोग गरि नै रहेका हुन्छन् । तर पनि यसको विशेषता बारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । गाजरमा हुने भिटामिन ‘ए’ ले धेरै नै शक्ति प्रदान गर्दछ ।
गाजरले पुरुषहरूमा यौन क्षमतामा पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि गराउँछ । भिटामिन र सेक्समा निकै नै गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । भिटामिनले पुरुषको शुक्राणु निर्माणमा तथा कामशक्ति बढाउन विशेष सहयोग पुर्याउंछ । विशेष गरी गाजरमा रहेको भिटामिनले यो कार्य गर्दछ ।
लसुनमा हुने पौष्टिक तत्वले रगत सर्कुलेसनमा मद्दत पुर्याउँछ । यसले रगतलाई अझै तिव्र बनाउने हुनाले सेक्स पावरमा पनि वृद्धि गर्दछ ।
भिटामिन सि ले भरिपूर्ण भिंडीको नियमित सेवनले तपाईको सेक्स पावरमा एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । जिङ्कको कमिले हुने यौन उत्तेजनमा कमिलाई यसको सेवनले परिपूर्ति गर्दछ । भिंडीको सेवनले थकान कमजोरी आदि समस्याको समाधान हुन्छ ।
लसुन जस्तै प्याजमा पनि पौष्टिक तत्व हुने हुनाले लसुनले जस्तै गरी यसले पनि सेक्स पावर बढाउन मद्दत पुर्याउंछ ।
गोलभेडामा हुने लियोपिनले पुरुषको कामशक्ति बढाउनुको साथै यौन उत्तेजनामा हुने समस्याको समाधान गर्दछ । साथै पुरुषमा हुने प्रोस्टेन क्यान्सर पनि गोलभेडाको नियमित सेवनले निको पार्दछ ।
सगरमाथा गल्स फुटसलको उपाधि छहारी ‘बी’लाई
चिसापानीमा दारुसँग होली मनाँउदै जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी,यसरी बन्छ सभ्य होली ?
तारकेश्वरमा तरकारी बजार निर्माण हुँदै
इतिहासका रचयिता पुस्ताले बिर्सेको अभागी :२००७ सालका जनमुक्ति सेना नरेन्द्र लामा
बालबिबाह गराएको भन्दै अभिभावकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएपछि…
‘कम्युनिष्ट सरकारको एक वर्ष, एक सय एक अपराध’ पुस्तक बिमोचन
के साच्चिकै सम्भोगको समयमा युवतीलाई हुन्छ पीडा हुन्छ ?
सम्भोगले बढाउँछ आयु
कति बेला र कति पटक सम्भोग गर्दा राम्रो ? जानी राखौ
महिलाले किन सम्भोग गर्छन् ? यी हुन् केही आश्चर्यजनक कारणहरु
अमेरिकी महिलाले ९ मिनेटमा ६ ओटा बच्चा जन्माएपछि…
प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘नेत्रविक्रम चन्दलाई चैत्र महिनाभित्रै नियन्त्रण गरिन्छ’
विप्लवलाई अर्को ठुलो झठ्का : कोशी ब्यूरो संयोजक पक्राउ परेको १२ घण्टा नबित्दै अर्का नेता पक्राउ
नेपाल र जापान सरकारबीच श्रम सम्झौता : न्यूनतम तलब दुई लाख रुपैयाँ
“विप्लव नेकपासँग वार्ताको कुनै संभावना छैन”
ग्लोवल संवाददाता – संयोजक